ကြေးနန်းဖြင့် ငွေလွှဲခြင်းဆိုသည်မှာ ဘာလဲ ? What isaTelegraphic Transfer? | Super Light Logistics
ကြေးနန်းဖြင့် ငွေလွှဲခြင်းဆိုသည်မှာ ဘာလဲ ? What isaTelegraphic Transfer?
Telegraphic Transfer (ကြေးနန်းဖြင့် ငွေလွှဲခြင်း) ဆိုသည်မှာ အီလက်ထရွန်နစ် နည်းလမ်းဖြင့် ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်းကို ရည်ညွှန်းရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဝေါဟာရတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ ခန့် ၁၈၇၂ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးသော ကြိုးမဲ့ ကြေးနန်းဖြင့် နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့မှုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ Western Union မှ အလွန်ဝေးလံသည့် ဒေသများသို့ ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့မှုကို ကြိုးမဲ့ကြေးနန်းမှ တစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်သည့်နည်းလမ်း စတင်တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုစဉ်က ကြိုးမဲ့ကြေးနန်း ငွေလွှဲပို့မှုကို ဆောင်ရွက်ရန် ငွေပေးပို့မည့်သူမှ ကြေးနန်းရုံးသို့ ရှေးဦးစွာပေးပို့လိုသည့် ငွေပမာဏနှင့် ဝန်ဆောင်ခကို ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ထု့ိနောက် ကြေးနန်းအော်ပရေတာမှ ငွေလက်ခံမည့်သူရှိရာ ဒေသရှိ ကြေးနန်းရုံးသို့ သင်္ကေတကုတ်ဖြင့် သတင်းပေးပို့ကာ ငွေလက်ခံမည့်သူအား ဆက်လက်အသိပေး ၊ ငွေထုတ်ယူခွင့်ပြုပေးခြင်းဖြစ်သည်။
20 ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင် ကြိုးမဲ့ကြေးနန်းစနစ်မှ တယ်လက်စနစ် (Telex) သို့ အဆင့်မြင့်အသွင်ကူးပြောင်းလာခဲ့ပြီး ငွေကြေးလွှဲပြောင်းပေးပို့ရာတွင် ပိုမိုမြန်ဆန် ပိုမိုကုန်ကျစရိတ် သက်သာလာခဲ့သည်။ ထို့နောက် နည်းပညာများ ပိုမိုခေတ်မီတိုးတက်လာသည့် အလျောက် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းပေးပို့မှုတွင် ကြိုးမဲ့ကြေးနန်း (သို့) တယ်လက်အစား အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ထားသည့် ကွန်ပြူတာများဖြင့် အစားထိုးဆောင်ရွက်လာကြသည်။
ယခုဆိုလျှင် ကြိုးမဲ့ကြေးနန်း နည်းပညာမှာ ရှေးဟောင်းတီထွင်မှုတစ်ရပ် အဖြစ်သာ တည်ရှိတော့ပြီး လက်တွေ့သုံးစွဲမှုမရှိတော့ပေ။ သို့ရာတွင် ယနေ့ ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပ အီလက်ထရောနစ် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းပေးပို့မှု ပုံစံအမျိုးမျိုးကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုရာတွင် Telegraphic Transfer (ကြေးနန်းဖြင့် ငွေလွှဲခြင်း) ဟူသော ဝေါဟာရကို အံ့သြဖွယ် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်သည်။ Telegraphic Transfer (ကြေးနန်းဖြင့် ငွေလွှဲခြင်း) ကို ” Wire Transfer ““(သို့) ““Electronic Money Transfer””ဟူသော ဝေါဟာရများနှင့် အချင်းချင်း ဖလှယ်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။သို့ရာတွင် အဆိုပါ ဝေါဟာရများကို အချင်းချင်း ဖလှယ်၍ အသုံးပြုမှုသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ရှုပ်ထွေးမှုများ ဖြစ်လာနိုင်မည်ဟု လေ့လာသူများက သုံးသပ်ကြသည်။
ဥပမာအားဖြင့် Telegraphic Transfer (ကြေးနန်းဖြင့် ငွေလွှဲခြင်း) ဟူသော ဝေါဟာရကို ဗြိတိန် ၊ သြစတြေးလျ တို့တွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး နယူးဇီလန်တွင် Electronic Money Transfer ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် Wire Transfer ဟူ၍လည်းကောင်း ပိုမို သုံးစွဲလျက်ရှိသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်မူ Telegraphic Transfer (ကြေးနန်းဖြင့် ငွေလွှဲခြင်း) ဟူသော ဝေါဟာရကိုအီလက်ထရွန်နစ်စနစ်ဖြင့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းပေးပို့မှုကို မရည်ညွှန်းပဲ နိုင်ငံခြားငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်း ကိုးကားရာတွင် အသုံးပြုသည်။
ကြေးနန်းဖြင့် ငွေလွှဲမှု မည်သို့ဆောင်ရွက်သလဲ (How to Telegraphic Transfer work?)
ပြည်တွင်း (သို့) နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးပေးပို့မှုတွင် အခြေခံအားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း (သို့) လူပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဘဏ်သို့ သတင်းအချက်အလက်များ (ငွေလက်ခံမည့်သူ၏ သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံအပါအဝင်) နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို အဆိုပြုညွှန်ပြရန် လိုအပ်သည်။ ဘဏ်များသည် အများအားဖြင့် ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့မည့်သူများ၏ ငွေလွှဲပြောင်းပေးရန် အဆိုပြုချက်များကို လူကိုယ်တိုင် (သို့) Online မှ တင်ပြရန် ခွင့်ပြုပေးသည်။
နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းပေးပို့ရန် (သို့) လက်ခံရန် အကြောင်းပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ (သို့) လူပုဂ္ဂိုလ်များ အနေဖြင့် တိကျသည့် ညွှန်ကြားချက်များ (သို့) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာဘက်များသို့ စုံစမ်း မေးမြန်းကြရမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မတူညီသည့် နိုင်ငံများမှ ဘဏ်များတွင် ကွဲပြားခြားနားသော လိုအပ်ချက်များ ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မျက်မှောက်နည်းပညာများအရ ငွေကြေးလွဲပြောင်းပေးပို့မှုသည် တစ်ရက် သို့မဟုတ် နှစ်ရက်အတွင်း တစ်ခါတစ်ရံ ပို၍ မြန်ဆန်နိုင် ပြီးစီးနိုင်သည် ။ ဝန်ဆောင်မှုပေါ်တွင် မူတည်၍ ပြည်တွင်း သို့မဟုတ် ပြည်ပ ငွေကြေးလွဲပြောင်းပေးမှု သို့မဟုတ် လက်ခံရရှိသူအတွက် ဝန်ဆောင်ခကို ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်သည်။
ယနေ့ နိုင်ငံတကာ Telegraphic Transfer နည်းပညာမှာ ကမ္ဘာအနှံ့ ဘဏ်အချင်းချင်း ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုအဖွဲ့ (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)(SWIFT) ကွန်ရက်အပေါ်တွင် အခြေခံထားရှိသည်။ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဘဏ်တစ်ခုမှ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြား မည်သည့်ဘဏ်သို့မဆို ငွေပေးချေမှုနှင့် ငွေကြေးများ ပေးပို့မှုကို SWIFT မှ ခွင့်ပြုပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ SWIFT ကွန်ရက်အတွင်းမှ ဘဏ်တိုင်းတွင် နိုင်ငံတကာ ငွေပေးချေမှုများ သွက်လက်မြန်ဆန်ရေးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည့် ကိုယ်ပိုင် SWIFT Code များ ရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် ခေတ်သစ် Telegraphic Transfer (ကြေးနန်းဖြင့် ငွေလွှဲခြင်း) တွင် SWIFT သည် တစ်ခုတည်းသော ရွေးချယ်ခွင့်မဟုတ်ပေ။ အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းပေးပို့မှုအတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများသည် အမေရိကန်ဗဟိုအစိုးရ ရန်ပုံငွေ၏ Fed wire System ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ Fed wire သည် အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ်၏ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှန်းရှိ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် တိုက်ရိုက် (သို့) ကြားခံဘဏ်များမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ထိုနည်းတူပင် အင်္ဂလန်ဘဏ်၏ CHAPS စနစ် (သို့) ဥရောပသမဂ္ဂ ဗဟိုဘဏ်၏ TARGETZ စနစ်ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာ ငွေပေးချေမှုများကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် စနစ်များလည်းရှိသည်။
Telegraphic Transfer (ကြေးနန်းဖြင့် ငွေလွှဲခြင်း) ပြုလုပ်သည့် ဝန်ဆောင်ခနှင့် လွှဲပြောင်းပေးပို့နိုင်သည့် ငွေပမာဏ ကန့်သတ်ချက်များသည်လည်း ပေးပို့သည့်နိုင်ငံ ၊ လက်ခံသည့် နေရာနှင့် ပေးပို့သည့်စနစ်အပေါ်တွင် မူတည်၍ အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။
ကြေးနန်းဖြင့် ငွေပို့မှုအတွက် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ (Required information foratelegraphic transfer)
ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု ပြီးမြောက်စေရေးအတွက် ပေးပို့သူနှင့် ပေးပို့မည့်နေရာနှင့် စပ်လျဉ်းသော သတင်းအချက်အလက်အချို့ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုသည် သူ၏ နာမည်နှင့် ဖွင့်လှစ်ထားသော ငွေစာရင်းနှစ်ခုအကြား လွှဲပြောင်းသည်ဖြစ်စေ (သို့) မတူညီသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦး၏ သီးခြားငွေစာရင်းများသို့ လွှဲပြောင်းသည်ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် စပ်လျဉ်းသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ငွေစာရင်းနံပါတ်များမှာ အလိုအပ်ဆုံး မလွဲမသွေ လိုအပ်မည့်အချက်အလက်များပင်ဖြစ်သည်။
ပေးပို့သည့် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ရန်နှင့် လုံခြုံရေးကိစ္စအလို့ငှာ လူပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သက်သေခံအချက်အလက်များသည်လည်း လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူပင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများကြားတွင်လည်း အတည်ပြုနိုင်မည့် အထောက်အထားများလိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
TTLC and TT in advance
နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် Telegraphic Transfer (ကြေးနန်းဖြင့် ငွေလွှဲခြင်း) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သိရှိထားသင့်သည့် ဝေါဟာရနှစ်ခုမှာ TTLC (Telegraphic Transfer Letter of Credit) နှင့် TT iI advance (Telegraphic Transfer in advance) တို့ပင်ဖြစ်သည်။ Telegraphic Transfer (Letter of Credit) မှာ ပစ္စည်းဝယ်ယူသူမှ နိုင်ငံခြားဘဏ်တစ်ခုသို့ ပစ္စည်းရောင်းချသူအား ငွေကြေးပမာဏ အတိုင်းအတာတစ်ရပ်ကို သတ်မှတ်အခြေအနေများ ကိုက်ညီသည့်အခါ ထုတ်ပေးရန် ညွှန်ကြားထားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းဝယ်ယူသူမှ ၎င်း၏ ဘဏ်တွင် Letter of Credit ကို ဖွင့်လှစ်ကာ ရောင်းသူထံသို့ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းရောင်းသူမှ Letter of Credit ကို သူ၏ ဘဏ်သို့ယူဆောင်ကာ သတ်မှတ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး (ဥပမာ ပစ္စည်းသင်္ဘောတင်ပို့ပြီး)နောက် ငွေထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Telegraphic Transfer in advance မှာ ကုန်ပစ္စည်းများ သင်္ဘောတင်ပို့ခြင်းမပြုမီကပင် ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့မှုဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသူအနေဖြင့် ပစ္စည်းများပေးပို့ခြင်းမပြုမီကပင် ငွေလက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သဖြင့် ပစ္စည်းဝယ်ယူသူအတွက် အရဲစွန့်ရမှုကြီးမားသည့် ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းပင်ဖြစ်သည်။
#SuperLight #Logistics #Knowledge #Telegraphic_Transfer